Maitiro Ekutarisa NFL pane Kodi: Zvakanakisa 2017 Wedzera-maNFL Mvura Kurarama - WebSetNet
Kodi, yaimbozivikanwa seXBMC, iri yemahara uye yakavhurwa sosi midhiya nzvimbo izvo zvinoita kuti zvive nyore kutarisa mabhaisikopu uye maTV kubva kune akasiyana masosi epamhepo. Unogona kurodha rako raibhurari yevhidhiyo yakanangana neKo, tora yepamhepo terevhizheni yeTV kubva mukati meapp, uye kunyange kuisa zvinowedzera zvinotsemura nzira dzisingaverengeki dzekuzvivaraidza nekuzvivhiringidza kwemaawa kumagumo.
Simba chairo rinobva kune risingazivikanwe rechitatu bato mawedzero, kunyanya iwo anogonesa kutenderera kuripo. Uine maturusi akakodzera unogona kutarisa mitambo yeterevhizheni nemitambo kubva kutenderera pasirese pane chero chishandiso. Iko kune kunyange zviri pamutemo uye zvisina kujeka zvinowedzera-zvekutarisa izvo NFL zvemukati!
Kuti uwane mitsara yemitambo yeNFL paKodi iwe unofanirwa kuisa chaiyo yechitatu bato mawedzero. Sezvakangoita na MLB zvemukati, maitiro acho ari nyore kupfuura zvaari kutarisa, saka ramba uchiverenga gwara rakazara rekuti ungatarisa sei NFL paKare.
Usati Wadhinda: Tora Yakanaka VPN
apo iyo Kodi software iyo pachayo yakavhurika sosi, yemahara, uye zviri pamutemo, zvimwe zvekuwedzera iwe zvaunogona kuisa yekuwanika zvemukati nenzira yakatsanangurwa se "grey zviri pamutemo". Kurarama kutenderera, TV, uye bhaisikopo plug-ins zvinowanzoitika kuongororwa uye kumhan'arwa kuhurumende nemasangano emakambani neIPP yako yemuno, ichikusiya uchinetseka pese paunoenda online.
Kuti uzvidzivirire kubva kune vanovheneka vanopa sevhisi zvese zvaunoda kuti uite kushandisa rakazvimirira renetiweki. MaVPN anoita semugero pakati pako nezvirimo zvauri kurodha pasi. Kazhinji, dhata senge nzvimbo yako, sisitimu inoshanda, uye ndeapi maRwizi auri kuwana anotumirwa mune yakasvibirira fomati kuburikidza neako webasa mupi webasa uko inogona kugoverwa pamwe kana kutengeswa kune vechitatu mapato. NeVPN inoshanda, ruzivo runosiya komputa yako runotumirwa kumaseva kutenderera pasirese uye rwakanyorwa kuti riite kuti riverengeke.
Haasi ese masevhisi eVPN akagadzirwa akaenzana, zvakadaro. Mamwe mabhendi emagetsi, kudzora mhando dzemafaira aunogona kurodha pasi, kuisa zvakavanzika zvako panjodzi nekuchengetedza matanda emabasa, kana kuva nezvinetso zvekumhanyisa mhanyisa zvinoita kuti kutenderera kwemavhidhiyo kuve zvisingaite. Kuti uone kuti VPN yako haina kukanganisa kukanganisa kwako kweKare zvemukati, ita shuwa kuti sevhisi inoisa pekutanga pazvinhu zvinotevera.
Fast download speed - MaVPN ese anowedzera imwe latency nekuda kwekuwedzera kwedata nzendo uye nekiseti pamusoro. Izvi zvinogona kugadzira kudonha kwakakura muhunhu hwemavhidhiyo aunotenderera, kunyanya kana iwe uchifarira masosi eHD. Kumhanya chinhu chakakosha mukusarudza VPN, saka ita shuwa kuti mupi wako anoisa chakanyanya kukoshesa pakukurumidza server kubatana.
Zero-logging policy - Pamusoro pekunyorera uye kusazivisa dhata, masevhisi akanaka eVPN anozove neyakaomarara mutemo pamusoro pekuchengeta zvinyorwa zvevashandisi. Izvi zvinopa yakanyanya yakakwira danho rekuchengeteka, sezvo ruzivo rwako rwepachivande rusina kumbochengetwa pakomputa yekunze. Kana VPN ikasataura mutemo wayo wekutema miti kumberi, ramba uchitsvaga mupi ari nani.
Kubvumira zvese traffic uye faira mhando - Mamwe maVPN anodzivisa kuti ndeapi mafaira uye vashandisi vemumigwagwa vanogona kurodha pasi, kusanganisira hova uye zvemukati kubva kunetiweki dzeP2P. Izvi zvinogona kupa Kodi zvisina basa. Vakanaka VPN vanopa havana zvirambidzo zvefaira zvemhando ipi neipi.
Nzvimbo yakanaka yehutachiwana - Imwe yemabhenefiti akakosha ekushandisa VPN iri kugona kushandura nzvimbo chaidzo kuti uwane zvemukati zvakavharwa negeo. Iyo yakawanda maseva iyo VPN ine, zvirinani.
Mumwe VPN mupi anoverengera kumusoro pane ese ari pamusoro maficha ari IPVanish. Iyo sevhisi inoisa pamberi pekutanga pane yega yega mushandisi uye inokwanisa kuendesa pasina kubayira kumhanya. IPVanish zvakare ine yakasimba mutemo zero-kutema matanda, risingaperi bandwidth, hapana faira mhando zvinorambidzwa, uye pamusoro mazana 750 maseva munyika makumi matanhatu dzakasiyana, ichiita sarudzo yakasimba yekukurumidza, mhando yepamusoro VPN.
Iyo sevhisi inotsigira ese maAdv add-ons ayo isu takaedza, ane ese mabhenefiti anogona kuunzwa neVPN, izvo zvinoita kuti NFL yako hove dzive dzakachengeteka, dzakavanzika, uye dziwanikwe zvisinei nekwaunogara.
Nzira yekugadzira sei Add-ons
Paunenge iwe waisa Kodi kune chako chaunofarira chishandiso, nyika yekuwedzera-ons inongoerekana yawanika kwauri. Zvese zvinhu kubva kumimhanzi plug-ins kune ekuwedzera maficha maficha, mhenyu terevhizheni, uye dzakasiyana siyana vhidhiyo hova ingori mashoma mashoma kure. Ko kurodha pasi kazhinji kunouya nekuvakirwa mukuwana kune maKo zvinyorwa, zvichikupa iwe seti yemahofisi ekuwedzera ma-ons iwe aunokwanisa kuisa nekushandisa ipapo ipapo. Kuti ubate zvemitambo zvine chekuita nemitambo, zvakadaro, unozofanirwa kutora mamwe matanho ekuwedzera.
Usati waisa chechitatu bato ma-add-ons Kodi inofanirwa kutora mafaera kubva kunowanikwa kunze.
Vhura Kodi uye tinya pane iyo giya icon kuti upinde iyo Sisitimu menyu.
Enda kuSystem Zvirongwa> Wedzera-ons
Shandura chinotsvedza padhuze ne "Zvisingazivikanwe masosi" sarudzo.
Gamuchira meseji yambiro inobuda.
Iye zvino iyo Kodi inogona kuisa ekunze mafaera, wagadzirira kutanga. Maitiro ekutanga kumashure kwekuisa nyowani-zvinowedzera zvinoshamisa kuti zviri nyore. Kutanga, udza Kodi kupi kwaunowana yakatarwa dura, inova bundle yekuwedzera-ons yakachengetwa pane yekunze server. Tevere, wedzera ichi chinzvimbo kuKo. Iine repository munzvimbo iwe unogona kutarisa zvirimo uye nekuisa zvinowedzera-pazororo rako.
Mhedziso yemaitiro ekuisa Kodi add-ons:
Vhura Kodi uye tinya giya icon kuti upinde muSystem menyu.
Enda kune File Manager> Wedzera Chitubu. Ungangoda kubaya iyo mbiri-dot kumusoro kuti uende pamusoro peye dhairekitori.
Nyora URL yeiyo yekuwedzera-pane repodhiyo muhwindo rinovhura.
Nyora zita retsika reposiferi rauri kuda kuwedzera wobva wadzvanya "OK".
Dzokera kuiyo huru menyu uye sarudza "Wedzera-ons".
Dzvanya iyo yakavhurika bhokisi icon kumusoro kwemenu bar.
Sarudza "Isa kubva kuZip File"
Sarudza repository iwe uchangobva kuwedzera.
Mirira iro repository kuti riise. Chiziviso chichaonekwa kana chagadzirira.
Dzokera kuAdv-ons menyu uye tinya iyo yakavhurika bhokisi icon zvakare.
Sarudza "Faka kubva repository"
Tsvaga iyo yekuwedzera-pane iwe yaungade kuisa kubva kune yekuchengetedza.
Isa yekuwedzera-on uye mirira ziviso yekuzivisa.
Fambisa yako yekuwedzera-kubva kumenyu huru uye unakirwe nezvako zvitsva zvemukati!
Kuona NFL pane Kodi - Official Wedzera-on
Mazhinji mavhezheni eKare anouya akarongedzwa nemakumi mazhinji emahofisi ekuwedzera. Izvi zvinopa zvese kubva kune nyowani mamakisi matehwe kusvika kumitauro mapaketi, emahara vhidhiyo uye mimhanzi hova, uye zvimwe zvakawanda. Kune akawanda mashandiro akavakirwa muKare kubva pakutanga. Iwe unogona kunyange kutarisa zvemitambo neNFL zvemukati!
Kuisa zvinotevera zvinowedzera, ongovhura yako Kodi app, enda kumenu huru, wobva wasarudza Wedzera-ons > Download. Iwe uchaona runyorwa rwepamutemo Kodi repository zvinopihwa. Bhurawuza runyorwa uye tsvaga sevhisi nemazita, wobva wadzvanya kuti uiwedzere pane yako menyu menyu.
Mavhidhiyo kubva kuNFL.com
Zita rinotaura zvese. Iyi yekuwedzera-inosanganisirwa neiyo yepamutemo Kodi repository uye inoita kuti iwe utarise mavhidhiyo makuru kubva kuNFL.com pane chero chinhu. Izvo zvakafanana nekuenda kune webhusaiti, chete chinongedzo chiri nyore zvishoma kushandisa.
NFL Matimu Mavhidhiyo
Imwe yekuwedzera-pane inoita chaizvo izvo zita rayo rinovimbisa. Tarisa mavhidhiyo kubva kuNFL zvikwata zvepamapeji epamusha epamusha, zvinosanganisira zvinoratidzwa, kubvunzurudzwa, uye kuongororwa kwemitambo ichangoburwa uye iri kuuya. Iyo inoshamisa inoshamisira yekuwedzera-on, kunyanya kana iwe uchitevera anopfuura rimwe timu.
NBC Mitambo Urarame Zvimwe
Tarisa ese NBC Sports uye NBCSports Network kufukidzwa kwezviitiko zviripo kubva kune yako Kuisirwa, zvese zvakasununguka uye zviri pamutemo. Kana iwe uchigara kunze kweUnited States iwe unozofanirwa kushandisa VPN uye nekuchinja yako chaiyo nzvimbo, zvikasadaro izvo zvemukati hazvigoneke.
Iyo iri nyore nzira yekutarisa yepamutemo hova kubva kuNFL Game Pass. Ziva kuti iwe unozofanirwa kuve neakaundi account neNFL Game Pass kuti ushandise iyi yekuwedzera.
Kuona NFL pane Kodi - Chechitatu Party-Wedzera-ons
AddictiveTips hairegerere kana kukurudzira chero kutyorwa kwemitemo yekodzero. Ndokumbira utarise mutemo, vanobatwa, uye njodzi dzehukororo usati watora zvinyorwa zvine copyright pasina mvumo.
Unofficial wechitatu bato maapplication ndizvo zvinoita Kodi chakadai chinoshamisa chidimbu che software. Izvi zvinowedzera-zvinowedzera mashandiro eiyo base app kubvumira kutenderera mavhidhiyo, mimhanzi, uye mabhaisikopo kubva kunowanikwa kutenderera pasirese.
Iyo yekudzikira kune yechitatu bato mawedzera-ons ndeyekuti haasi ese akavimbika. Zvinyorwa zvinonyanya kuzivikanwa nekushandura nzvimbo kana kunyangarika zvachose, hova dzinovharwa kana kugadziriswazve nguva dzose, uye zvimwe zvirimo zvinotowanikwa zvisiri pamutemo. Ivo vanogona kuve kunetsa, asi huwandu hwezvinyorwa zvavanoburitsa zvinokoshesesa izvo zveapo neapo dambudziko.
Iwo maAd add-ons pazasi aratidza kuva anovimbika sosi yekushambadzira mitambo, NFL zvemukati, mafirimu, uye mamwe mavhidhiyo.
Imwe yeakanyanya kutenderera ekuwedzera anowedzera-maAti, chiteshi PEAR inouya nechinhu chepamhepo chinokutendera kuti utore vhidhiyo yako uye urarame kuyerera raibhurari kubva kune chero browser. Kune akakura akasiyana nzira dzekusarudza kubva, zvakare, kusanganisira NFL nemitambo nzizi kubva kutenderera pasirese. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuwedzera kwavari kuchiteshi chako PEAR raibhurari uye ivo vanove vanowanikwa kutenderera kuburikidza neKana ipapo ipapo.
Izvo zvakakosha kuti uzive iyo chiteshi PEAR inogumira huwandu hwematanho iwe aunogona kuva mashanu. Kana iwe uchida kuwedzera zvimwe, iwe uchafanirwa kukwidziridzira kune yakabhadharwa premium sevhisi, iyo isina hukama neKare kana chiteshi PEAR yekuwedzera.
Iyo inokurumidza nzira yekuwana chiteshi PEAR kumusoro uye kumhanya ndeyekuisa kubva kune github repository. Iyo nzira inenge yakafanana nekuisa ma-add-ons akanyorwa pamusoro.
Nzira yekuwedzera chiteshi PEAR kune Kodi:
Download chiteshi PEAR zip faira.
Enda kune yakakura menyu menyu.
Tsvaga chiteshi Pear faira rawakadhirodha pakutanga. Inofanira kutumidzwa chimwe chinhu seichi: plugin.video.channelPEAR-master.zip
Mirira kuti kuiswa kwacho kuzadzike.
Pawebhusaiti yako, gadzira yemahara account ku chiteshi webhusaiti PEAR.
Wedzera migero kuraibhurari yako kubva pawebhusaiti.
Dzvanya pa Raibhurari> Pair Chishandiso
Sarudza Kodi kubva pane yekudonhedza runyorwa
Kopa iyo yakasarudzika URL.
Dzokera kuKo uye kurudyi tinya pane chiteshi Pear yekuwedzera-pane icon.
Sarudza "Wedzera-pane marongero"
Pinda raibhurari yako URL uye chengeta shanduko.
Vhura zvakare yakavhurika chiteshi PEAR pane yako Kodi mudziyo uye iwe unokwanisa kuwana yako nyowani raibhurari.
Kana zvasvika pakuwana nyore kurarama mitambo yemitambo, zvakaoma kurova iyo Phoenix yekuwedzera. Kuisa iyi yechitatu bato app kunokupa iwe kuwana kwakakurumbira chiteshi kubva kuUS neUK, kusanganisira basketball, baseball, uye NFL. Kunze kwemitambo, Phoenix ine toni yezvinyorwa zviripo kutenderera, ichikupa chimwe chinhu chekuita iwe uchimirira nguva yehafu kuti ipere.
Kuisa iyo Phoenix yekuwedzera-pane zviri nyore sekuwedzera iyo Fusion repository, uye nekuisa Phoenix kubva kune yakadzingwa zip faira. Paunongovhura Phoenix unowana chikamu chese chakatsaurirwa kumitambo, kusanganisira Sports Dhimoni LIVE uye Sports Replays.
Maitiro ekuisa Phoenix pane Kodi:
Vhura Kodi pane yako kifaa.
Dzvanya paiyo giya icon kuti upinde iyo Sisitimu menyu.
Enda kune File Manager> Wedzera Sosi (ungangoda kubaya iyo mbiri-dot kuti uende pamusoro pechinyorwa)
Nyora mune inotevera URL chaizvo sezvazviri: https://fusion.tvaddons.ag
Zita zita idzva repositi "Fusion"
Dzokera kuiyo main menyu.
Sarudza "Fusion" inoteverwa ne "tax-repos"
Tsvaga wakananga kuzasi kwerondedzero yeiyi faira: repository.xmbchub-1.0.7.zip (Ziva kuti nhamba dzeshanduro dzinogona kuchinja)
Isa iyo zip zip.
Tsvaga "TVADDONS.ag Wedzera-paChinyorwa"
Bhura pasi pasi ku "Vhidhiyo Wedzera-ons"
Sarudza uye gadza Phoenix.
Kana kuiswa kwapera, unogona kuwana Phoenix kubva kumenu huru.
SportsDevil inoenda kupfuura NFL kupa migero mhenyu yemitambo ingangofungidzirwa. Iyo yekuwedzera-pane iri nyore kwazvo kushandisa uye inopa inotyisa nhamba yevhidhiyo hova yemahara. SportsDevil zvakare ine mukurumbira wekuchengetedza hova dzayo kusvika pari zvino. Hapana akafa mafaera pano, ingori mafashama anogara aripo emitambo kukuchengetedza iwe.
Kuti uwane SportsDevil uye yayo NFL zvemukati, iwe unozofanirwa kuwedzera SuperRepo kune yako Kodi kuisirwa. Izvi zvinokupa mukana wekuwana akawanda emamwe plug-ins mukuwedzera kune SportsDevil.
Maitiro ekuisa SportsDevil pane Kodi:
Nyora iri rinotevera URL chaizvo sezvarinoratidzika: http://srp.nu
Zita zita idzva repamusoro "SuperRepo"
Sarudza "SuperRepo" inoteverwa neshanduro yako zita reKare.
Sarudza "Zvese" kuisa iyo yese SuperRepo seti yekuwedzera-ons.
Tsvaga uye tinya "SuperRepo Zvese"
Tsvaga "SportsDevil Launcher" uye isa.
Tsvaga SportsDevil kubva kumenyu huru kana kuiswa kwapera.
Castaway ndechimwe chakawanda-chinangwa kutenderera chiteshi chinopa mukana kune yakawanda yakawanda yezvinyorwa. Zvipo zvaro zvemitambo zvakati wandei zvakasimba uye zvakasiyana pane kukwikwidza, izvo zvinoita kuti chive chisarudzo chikuru chekuona mitambo yeNFL.
Nzira yakanakisa yekuisa Castaway iri kuburikidza neiyo Fusion repository, iyo zvakare inoratidza Phoenix yataurwa pamusoro. Kana iwe uchitova neFusion yakaiswa, ruka kuenda kunhanho nhamba yechinomwe.
Maitiro ekuisa Castaway pane Kodi:
Sarudza "Fusion" inoteverwa ne "kutanga-pano"
Isa iyo faira inonzi plugin.program.indigo-1.0.4.zip (Ziva kuti nhamba dzeshanduro dzinogona kuchinja.)
Dzokera kuAdv-ons menyu uye sarudza iyo icon yeIndigo.
Kubva mukati meIndigo, enda kuAddon Installer> Sports Addons
Sarudza "Castaway" kubva kumusoro kwerondedzero.
Mirira kuti kuiswa kwacho kupedzise, ​​wozosvika kuCastaway kubva kumenyu huru.
Haugone kubata mutambo kana uri mupenyu? Usanetseke, NFL Replays iri pano kubatsira! Izvi zvinowedzera-kuwedzera kweKo zvinokupa mukana wekuchengetedza mumitambo yeNFL yakachengetwa mushure mekunge vatotepfenyura. Kana iwe uchikwanisa kunzvenga kukanganisa iyo yekupedzisira mamaki, iwe uchave uine akakodzera shamwari yekutarisa mitambo panguva yako yekuzorora.
NFL Kudzokorora kunowanikwa kuburikidza neSuperRepo repository. Kana iwe uchinge watove nekumisikidza, ruka kuenda kunhanho nhamba nomwe pazasi.
Nzira yekuwedzera NFL Kudzokorora kuKare:
Tsvaga "NFL Replays" uye isa
Tsvaga NFL Replays kubva kumenyu huru kana kuiswa kwapera.
Uchishandisa VPN kusvika kuDunhu Rakavharirwa Zvemukati pane Kodi
Kodi inzvimbo agnostic software, zvichireva kuti chero munhu kutenderera pasirese anogona kuiisa uye kuishandisa pasina muganho. Chechitatu bato yekuwedzera-ons uye hova dzavanotora kubva hazvingagovane izvo zvakafanana uzivi, zvisinei, kunyanya kana zvasvika pakurarama mitambo. Kuti uve nechokwadi chekuti haumbomhanye mune izvi zvinogumbura, ita shuwa kuti unomhanya VPN paunenge uchiyerera kuburikidza neKare.
VPNs dzinopa huwandu hwakavanzika uye husingazivikanwe mabhenefiti ayo anovaita maturusi akanakisa ekushandisa kwemazuva ese. Ivo zvakare vanokupa iwe kugona kusarudza uye nekushandura yako chaiyo nzvimbo nekungodzvanya mashoma. Panzvimbo pekubatanidza iyo IP kero kana iwe uchinge waenda online, maVPN anokupa iwe isingazivikanwe IP inosangana neimwe yevavo server Zvese iwe zvunofanirwa kuita kusarudza kuti ndeipi server yaungade kubatana nayo uye iwe unowana iyo IP kero inosangana nenyika iyoyo.
Kushandisa VPN kuwana geo-inorambidzwa zvemukati iri nyore asi inoshanda nzira yekutarisa mitambo kubva kutenderera pasirese. Yekutenderera masevhisi anozivikanwa nekuvharira vashandisi mune dzimwe nyika kubva pakuona yavo mitambo, kunyanya iyo NFL. NeVPN inoshanda uye yekuisirwa Kodi pamwe nemawedzero, iwe unogona kudzora zvirango izvi kutarisa chero chaunoda.
Zviri pamutemo here kuyerera NFL pane Kodi?
Chechitatu bato-ma-ons muKare anoshanda nekutsvaga dhata dze data kubva kutenderera internet nekuzviunganidza munzvimbo yepakati. Izvo hazvinyatso kugadzira kana kupa zvirimo zvauri kutarisa, ivo vanongonongedzera kune hova uye fanera zvese pamwechete. Paunotarisa mutambo weNFL muKare urikubatana neimwe saiti isina hukama nerukova. Izvi zvinomutsa mubvunzo uri nyore wekuti ndeipi sevhisi iri kutyora kuti ndeupi mutemo, mupi wezvemukati kana mununuri wezviri mukati, uye kana muoni aine mhosva kana ivo vasingazive kunobva faira.
Iyo indexing hunhu hweKa uye ayo akasiyana siyana mawedzero anoiisa mune zviri pamutemo grey nzvimbo. Mitemo inosiyana zvichienderana nenzvimbo yako pamwe nerudzi rwe zvemukati zvauri kuwana, zvichireva kuti hapana yakajeka hongu kana kwete mhinduro kumubvunzo. Izvi hazvina kumisa vashandisi veinternet kubva kunongedza vashandisi veKati kumatare, zvisinei, ndicho chimwe chikonzero nei uchifanira kugara uchishandisa VPN kana uchiona hova.
Kuyerera NFL kuTV yako
Kodi inowanikwa pane akasiyana mapuratifomu, anosanganisira nharembozha, malaptop, mapiritsi, uye akazvipira TV mabhokisi. Izvi zvinoreva kuti haufanire kumbundirana pamberi petafura yako kuti utarise mhando yakanaka yeNFL. Imwe yedzakareruka nzira dzekusundira Kodi zvemukati kuTV yako kuiisa pane yeAmazon Fire TV Stick. Chidiki chakakwenenzverwa uye chisingadhuri chinovhara muTV yako kuti uwane nyore kune ese mawedzero uye zvekuwedzera zvataurwa pamusoro.
Kuisa Kodi pane yeAmazon Fire TV iri nyore kupfuura zvaungatarisira. Iwe unogona kunyange wedzera VPN kune mudziyo yeiyo yekupedzisira mukureruka, wega kutenderera.
Tiudze kuti zvinoshanda sei kwauri, pazasi.
Isa iyo ESPN 3 Wedzera-on yeKare - Tarisa Live Mitambo neESPN 3
← Maitiro Ekugadza Pakati Dhiza pane Yako Kubata Pad Samsung Ine Simba Idzva Giresi Cherechedzo 8 Ichakwidza Netflix Mu 4K HDR →